मुकुन्देले गरे झापाकी इन्दिरा सङ्ग्रौलासँग इन्गेजमेन्ट, कहिले गर्दैछन बिहे ? - ramechhapkhabar.com
मुकुन्देले गरे झापाकी इन्दिरा सङ्ग्रौलासँग इन्गेजमेन्ट, कहिले गर्दैछन बिहे ?
समृद्ध नेपाल ‘मुकुन्दल्याण्ड’ बनाउन लागिपरेका मुकुन्द घिमिरे अर्थात् मुकुन्देले शनिबार इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । झापाकी इन्दिरा सङ्ग्रौलासँग इन्गेजमेन्ट गरेको फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका उनले बिहे कहिले गर्ने भन्नेबारे खुलाएका छैनन् ।
कुनै बेला रत्नपार्कको पिपलको रुखमा चढेर भाषण गर्ने उनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चामा छन् । आम मानिसभन्दा आफू फरक रहेको बताउने उनी मुकुन्दल्याण्डको उद्घोष गर्दै आएका छन् । केही महिना यता मङ्सिरमा बिहे गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले केटी खोजिरहेका थिए ।
केपी ओलीलाई ‘बा’ भन्नेहरुको मात्रै एमालेमा भविश्य छ : अध्यक्ष नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओलीलाई ‘बा’ भन्नेहरुको मात्रै एमालेमा भविश्य रहेको बताएका छन् ।
शनिबार (आज) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)गोदावरी नगर कमिटी घोषणा तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गुटको राजनीति गरेको आरोप लगाउदै यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस्तै उनले भुत्ते विचार बोकेर कम्यूनिष्ट पार्टी नचल्ने पनि बताएका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले केपी शर्मा ओलीले रेलको सपना बाडेको आरोप लगाए ।
उनले घरघरमा हावाबाट ग्यास, विजुली जस्ता सपना बाड्दै गर्दा जनकपुरमा लिगनै नबनाई रेल ल्याएको तर्क गरे । उनले ठूलै कमिशनको खेल भएको जानकारी दिए ।